Kedu ihe bụ akụkọ #MyHodges gị? Online ma ọ bụ On-Campus »Mahadum Hodges
Nabata na Mahadum Hodges!
Nọrọ Nso, Ga
Onye Ọ Bụla Nwere Akụkọ Ọ Ga-akọ
Kedụ ihe akụkọ akụkọ akụkọ #Hodge gị ga-abụ?
Mahadum Hodges Covid Usoro ogbugba ndu agbanweela
Masks dị atụ aro, ma ọ bụghị chọrọ.
Mgbakwunye na nhichapụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'ụbọchị ruo otu ugboro n'ụbọchị.
Social Distancing bụ gbara ume.
Sneeze Ndị nche nọrọ n’ebe ha nọ ugbu a; a ga-enyocha ha na ụbọchị 30-60.
A na-akwụsị ite kọfị n'ime ebe ezumike ahụ; a ga-enyocha nke a n'ime ụbọchị iri atọ.
N'agbanyeghị akụkọ gị, anyị nwere ike inyere gị aka ịmalite. Ma ị bụ onye ugbu a, na-alọghachi, ma ọ bụ na ị ga-achọ nwa akwụkwọ kọleji, anyị mepụtara ụzọ maka agụmakwụkwọ gị iji nye gị ikike ịkwesiri ịga nke ọma. Na mgbakwunye, anyị agbanweela usoro anyị ka ha rụọ ọrụ na ndụ gị. Hodges U, mahadum nke emere maka unu!
Nna-ukwu, Bachelor's, Associate, ma ọ bụ Asambodo, anyị nwere usoro mmemme maka mmuta ihe omumu gi. Na mgbakwunye, dị ka akwadoro mahadum online, I nwere ike were ọtụtụ mmemme mmụta anyị kpamkpam na ịntanetị.
Mgbanwe Kwadoro. Mee ngwa ngwa. Ejiri Gburugburu Gị. Nọrọ Nso. Gaa Far. Hodges nke U.
Mahadum Hodges nwere obi uto na ha nwetara aha ahụ dika Panlọ Ọrụ Na-eje Ozi Hispaniki site Association nke Hispaniki nke kọleji na mahadum - Hablamos Español
Hodges U Ejiri # 2! - 2021 Klas nke kacha mma na Florida site na ụgwọ ọnwa
Dental Hygiene CODA Nleta nleta
The Commission on Dental Accreditation na-anabata ndị ọzọ kwuru maka ọbịbịa Hodges University Dental Hygiene nzere ntozu saịtị nleta na October 12-13, 2021. Oge mmechi maka ịnyefe okwu bụ ụbọchị 60 tupu nleta saịtị ahụ. Biko lee akwụkwọ ndị metụtara ya site na Commission on Dental Accreditation maka ozi ndị ọzọ. Mụtakwuo otu esi eziga ozi na iji njikọ ahụ Ebe a.
Mahadum Hodges Online
Na-elekọta ọdịnihu gị mgbe ị họọrọ Mahadum Hodges maka agụmakwụkwọ gị n'ịntanetị. Anyị na-enye usoro ọmụmụ ọnwa a na-ebugharị na usoro ịntanetị iji nyere ndị okenye na-arụ ọrụ aka iru ihe mgbaru ọsọ ha. Chọpụta karịa banyere otu ị ga-esi nweta ihu ọma nke onwe na klaasị mebere taa!
Enweghị Ihe Omume dị
Pasent Placekwụ Ọrụ Job
Pasent nke ụmụ akwụkwọ na-anata AId
Nde na Onyinye Enyemaka Ego
Pasent PTA gafere ọnụego
Ihe Ourmụ akwụkwọ Anyị Kwuru
Hodges bụ nnukwu ahụmịhe. Gaghị egbu oge. Have raara onwe gị nye, nwee ịhụnanya, ma nwee ntụkwasị obi nke ndị nkuzi nke n’eme ya niile. The mmụta gburugburu ebe obibi bụ ịrịba; ọ na-adị gị mma ma chọọ ịmụta. Agụghị akwụkwọ agụmakwụkwọ ma hụkwa mmadụ niile n'anya. Ndị nkuzi rapara gị n’ahụ n’ihe ọma na ihe ọjọọ ma mee ka ị mara na ị bụ onye. Ọ bụ mgbalị otu na usoro nkwado dị ukwuu n'afọ niile. Hodges kụziiri m inwekwu mkpali na raara onwe m nye n'ihe niile m na-eme.
Ihe ịntanetị masịrị m. O mere ka o kwe m omume ịga ụlọ akwụkwọ mgbe m na-arụ ọrụ oge niile na ịbụ onye naanị ya na-azụ ụmụ. Arụ ọrụ ahụ dị nhịahụ ma ndị prọfesọ ahụ enweghị atụ. Aga m akwado ndị Mahadum Hodges.
Mahadum Hodges abụwo ụlọ akwụkwọ dị ịtụnanya ịga. Ewerewo m klaasị site na oge oge ruo oge, na-agbanwe ma laghachi azụ n'ime afọ 5 gara aga, ebe m na-arụ ọrụ oge niile. Ka m na-achọ klasị ịga na mgbagwoju anya klaasị kacha mma maka ogo m, ahụrụ m onye ọrụ Hodges raara onwe ya nye nke meworo ka usoro ahụ dị mfe na enweghị mgbu. Oriakụ Jeanette Colon abụgo chukwu. Ọ na-ewepụta oge oge ọ bụla iji nyere m aka, zaa ajụjụ, ma chọpụta na emechara ihe n'oge. Nraranye nye oru ya bu ihe di egwu ma jiri obi uto ya nye aka nyere m aka itughari. Echere m na m ga-emecha Nzere Master n'ihi na ọ na-agba ume. Daalụ maka inwe Oriakụ Colon dịka onye ọrụ. Mmenen̄ede mma enye ye ọkpọsọn̄ utom emi enye anamde.